Somalism – Majaladda
Somalism.so waa deggel hormuud u ah falanqeynta Siyaasadda Arrimaha Dibadda, wararka madaxa bannaan iyo ajendaha-dejinta wararka, falanqaynta siyaasadeed iyo faallooyinka fikirka-gaarka ah ee sida gaar ah loogu qoray/diyaariyey jiilka cusub.
Leave a Comment	/ 2021 / By Somalism
Xurgufyada ka dhaxeyso Mareykanka iyo Iiraan waxay soo socotay in ka badan 40 sano illaa iyo hadana xal waara lagama gaarin khilafaadka u dhaxeeyo labadaan wadan. Taliyaha ciidamada khaaska ah ee ilaalada kacaanka Iiraan, Ismaaciil Qaani, ayaa sheegay in ?dilka loo geystay taliyihii hore ee ciidankaas, Janaraal Qaasim Suleymaani, uusan Iiraan ka hor istaagi doonin …
?Aargoosiga dilkii Suleymaani wuxuu ka dhici karaa gudaha Mareykanka ? ayuu yiri Ismaaciil Qaani, Read More »
Xariirka Imaraatka iyo Israa?iil: Maalin Kale oo Mugdi leh oo Loogu Talagalay Reer Falastiin
Leave a Comment	/ 2020 / By Somalism
Kadib dagaalkii 1967 ee Israa?iil iyo Carab oo dhex maray Masar, Urdun iyo Suuriya oo dhinac iyo Israa?iil oo dhinaca kale, waddamada carabta ayaa kafaala qaaday oo riixay qaraarkii Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay 242.? Qaraarkii UNSC ee 242 ayaa sanadihii ugu dambeeyay loo adeegsan jiray aasaaska ee wadahadalada u dhexeeya carabta iyo Israa?iil.?Qaybta ugu …
Xariirka Imaraatka iyo Israa?iil: Maalin Kale oo Mugdi leh oo Loogu Talagalay Reer Falastiin Read More »
Waxaanu jecel nahay reer Binu Israa?iil!
Donald Trump wuxuu safarkiisiisa ugu horreeyay ee dibadda ah isagoo ah Madaxweynaha Mareykanka, booqday Israel. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqday Israa?iil wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee booqda Darbiga weyn ee Israa?iil, arintaan ayaa noqonaysa arin taariikhi ah. Isagoo xirnaa koofida kippa, Trump wuxuu si heer sare ah u aaday meesha quduuska ah ee …
Waxaanu jecel nahay reer Binu Israa?iil! Read More »